मुस्लिम पूर्व बिरालोहरु एक विशेष श्रद्धाको। यो पाल्तु जनावर मोहम्मद। तर के नस्ल त्यो उहाँले आफ्नो ओढ्ने को बाहुला काटेर गर्न उपयुक्त छ कि, pussycat जसको निद्रामा अगमवक्ता परेशान यति भयभीत थियो belonged? को ईरानी एक फारसी, र पूर्व तुर्क साम्राज्य को बासिन्दाहरू यसलाई थियो विश्वास छ कि दावी टर्की Angora। बिरालो नस्ल, अंकारा शहर पछि नाम XV शताब्दीमा पश्चिमी यात्री लेखोटहरूमा उल्लेख, (प्राचीन समयमा यो फरक एक सानो भनिन्थ्यो)।
को xvi शताब्दीमा संरक्षक मा पिएत्रो डेला घाटी इटाली प्रजनन लागि यी दुई बिरालोहरु ल्याउन एक असफल प्रयास गरिएको थियो। को XVII र XVIII शताब्दीयौंदेखि मा Angora Richelieu र Marii Antuanetty को कोर्ट मा धेरै फैशन भएको छ। तर त्यसपछि "फारसी उछाल" दुवै मिश्रित नस्ल आउनुहोस्। पुनस्थापित angora नूर्नबर्ग मा बीसौँ शताब्दीको 20s मा जर्मन द्वारा राखे थियो। विशुद्ध जर्मन thoroughness देखि तिनीहरूले नस्ल को विशेषताहरु वर्णन र पछि मानक स्वीकार गरे। रूस मा, टर्की Angora त्यहाँ एक लामो समय पहिले थियो, तर उनको लोकप्रियता को शिखर रूसी-टर्की युद्ध मा आए। शाही मनपर्ने राजकुमार Potemkin क्याथरीन द्वितीय दुई "पदक" kitties प्रस्तुत। खैर, Angora को घर नस्ल लगभग धमिलो हुँदा एक समय थियो। ताकि टर्की अधिकारीहरूले चिडियाखाना, अंकारा र इस्तानबुल मा प्रजनन जनावर मा एक उर्दी जारी।
अब जनावर आफु को लागि। बिरालो कस्तो - टर्की Angora? जनावर एक, सानो धेरै मनोरम छ। Pointe फ्लफी मा नाच भने यसलाई उत्प्रेरित गर्छ। संसारमा लामो-haired बिरालोहरु को धेरै जातिहरु छन्, तर angora कोट विशेष छ - मध्यम लम्बाइ को शरीर, र घाँटी मा, "प्यान्ट" र तरंग ऊन रूपमा पुच्छर। र त्यहाँ कुनै पनि undercoat बिना केवल गार्ड hairs छ! प्राकृतिक अनुग्रह टर्की महिला मात्र राउन्ड पैड, सानो चुच्चा snout र ठूलो कान लामो खुट्टा जोड दिन्छ। यसको भद्र आकार तापनि उनको मा मांसपेशीमा राम्रो विकास: एक वास्तविक र्नतकी, स्लिम, toned को शरीर।
रूस मा, यो विश्वास छ वर्तमान टर्की Angora कि यो हिउँ जस्तो सेतो हुनेछ, तर यो छैन। वास्तवमा, मानक रंग को एक विस्तृत विविधता हुन सक्छ: क्रीम, नीलो, रातो, कालो। र आफ्नो डेरिवेटिव, "धुवाँ", "कपास", "Tabby"। एक रंग एक, अशुद्धियों मुक्त, र नाक छाला र पन्जा पैड थियो कि मुख्य कुरा सुट को मुख्य स्वर थिए। को लागि रूपमा आँखाको रंग, सबैभन्दा टर्की "अंकारा Cady" मा बेशकीमती: एक आँखा एक बिरालो नीलो हुन र दोस्रो - सुन्तला। जो हामी थाहा रूपमा पनि, फरक रंग आँखा थिए "तुर्क को पिता" हवाई अड्डा Ataturk, उपासनालाई एउटा आदर - तर यो छ।
रूस मा, सुशील सेतो बिरालोहरु नीलो आँखा, हुनत यस्तो व्यक्तिहरूलाई अक्सर बधिरता ग्रस्त। किनभने पश्चिम यो दोष को यो किनभने एक बुना 100% को, सँगै दुई सफेद angora पार गर्न निषेध गरिएको छ तर अल्पविकसित र बहिरा बिरालोको बच्चाहरुको जन्म छन्। टर्की Angora मात्र उनको निहित रोग, अर्को विषय पनि छ: Ataxia। छुट हुन र रोग feline को सम्भावना को एक ठूलो प्रतिशत hypertrophic cardiomyopathy। तर ज्यादातर, लामो-livers सूचीमा यो नस्ल समावेश गरिएको छ।
टर्की Angora - सक्रिय, बौद्धिक र खाजिनिति गर्ने बिरालो। त्यो सामान्यतया एक उहाँले एक वास्तविक मास्टर ठान्नुहुन्छ कसलाई, परिवारको सदस्य छनोट। तपाईंको प्राथमिकता हो भने - घर सिद्ध आदेश, त्यसपछि तपाईं अर्को नस्ल को जनावरको चयन गर्नुपर्छ। "Dyurasel" द्वारा सम्मिलित ब्याट्री जस्तै angora - यो थकित गर्न तयार छ, र साँझ सम्म बिहान चाहेअनुसार। उनको आवाज सुमधुर र त्यो अक्सर होस्टहरूको संग संचार। कारण वृक्ष को अभाव गर्न, सौंदर्य कुनै पनि समस्या प्रस्तुत गर्दैन।
खाद्य "Dilly" कुकुर को लागि: संरचना, निर्माता, समीक्षा
Hamsters को प्रकार, घर थुनामा लागि उपयुक्त
घर र प्रदर्शनी पुडल haircuts
चित्रकला पाठ: कसरी गुलाब आकर्षित गर्न
के humidifier बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो? Humidifiers: समीक्षा
कसरी आफ्नै हातले विवाह गर्न मुद्रा को एक उपहार बनाउने?
टमाटर, विभिन्न महत्त्वपूर्ण सही छनौट गर्न छ
"Marvel" इतिहास। Electra Nachios - महिला निन्जा
जीवन र Lyudviga भ्यान Beethoven को काम। Beethoven
Navka र Bashar: पूर्ण उपन्यास
Davit: प्राविधिक विशेषताहरु, उद्देश्य
कसरी मा अदृश्य बन्न "सीएस: जाओ"? चरण पुस्तिका द्वारा चरण